Etu ị ga-esi kpọghee bootloader nke LG gị Gam akporosis
N'ime usoro nkuzi a ga - enyere aka, aga m egosi gị usoro ziri ezi kpọghee LG bootloader gị, kpọmkwem anyị ga-enwe ike kpọghee bootloader ma ọ bụ bootloader nke LG G4 nlereanya H815, LG G5 nlereanya H850 y LG V10 nlereanya H960A.
Usoro a dum akpọchi bootloader nke LG gịỌ bụ ezie na na mbụ ọ dị ka ọ na-agwụ ike ma ọ bụ na-esiri ndị ọrụ na-enweghị uche ọfụma ike, ọ bụrụ na ị soro usoro ndị anyị ga-egosi gị ebe a na leta ahụ, ị ​​ga-achọpụta na ihe ahụ esighi ike dịka ọ dị na obere karịa oke ọkpa crows, ị ga-enwe bootloader unlocked na njikere nwụnye nke gbanwetụrụ mgbake na mgbọrọgwụ nke gam akporo ọnụ gị.
1 Chọrọ iji banye na akaụntụ iji nwee ike kpọghee bootloader nke LG gị
2 Esi mepee Bootloader nke LG gị
Chọrọ iji banye na akaụntụ iji nwee ike kpọghee bootloader nke LG gị
Ihe mbu a choro ma obu ka ị mara na ị ga-eburu n'uche, bụ ịmara nke ahụ Mgbe ị na-emeghe mkpọghe nke bootloader nke LG gị, ị ga-atụfu data niile na ozi nke ọnụ gị., yabụ ọ bụrụ na ị nwere ihe dị nro ịchọrọ ịkwụ ụgwọ niile, ihe mbụ ana - echetara gị na ọ ga - adị mma ndabere foto gị niile, vidiyo, egwu na ihe niile ị chọrọ iji naghachi ke ofụri ofụri mgbe bootloader lokpọghe usoro. M na-akwado ime na ngwa niile na egwuregwu arụnyere na LG gị.
Ozugbo echebara ma ghọta nke a, ihe ọzọ ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịmebeghị ya, bụ wụnye ndị ọkwọ ụgbọala LG na kọmputa gị na Windows sistemụ arụmọrụ. Maka nke a, ị ga-agbaso usoro ndị m gosipụtara a bara uru nkuzi.
Nzọụkwụ ikpeazụ nke ihe niile dị mkpa iji mezuo, bụ ntinye ADB na Fastboot na sistemụ arụmọrụ Windows gị, ọkacha mma n'ime C / draịva. N'ime nkuzi a ndị ọzọ, m na - egosi gị usoro site na itinye ADB na Fastboot site na nzọụkwụ.
Ugbu a site na LG mobile gị dakọtara, anyị ga-aga ntọala ntọala wee banye banyere ozi / ngwanrọ Anyị ga-pịa ugboro asaa n'usoro na nhọrọ nke na-ekwu nchịkọta mkpokọta, ozugbo emechara nke a, anyị na-apụ na ntọala ahụ ma meghee ha ka anyị hụ ka njedebe nke ihe niile ọhụụ ọhụrụ pụtara n'okpuru aha Nhọrọ mmepe u Mmepụta nhọrọ.
Anyị na-emeghe menu nhọrọ ọhụrụ a wee họrọ ma anyị na-eme ka nhọrọ USB debugging rụọ ọrụ na nhọrọ na-ekwu Ekwe ka OEM Unlock.
Ozugbo anyị mechara ihe a niile, anyị ga-enyocha na anyị nwere batrị LG zuru ezu, Anyị na-amalitegharia kọmputa nkeonwe anyị na-aga n'ihu na nkuzi na esi meghee bootloader nke LG gị.
Esi mepee Bootloader nke LG gị
Anyị na-aga na folda ebe anyị wụnye ADB na Fastboot, dị ka iwu zuru oke na ndekọ mgbọrọgwụ nke Windows anyị gosipụtara na leta C /, anyị abanye na folda gam akporo, C / gam akporo na oghere ọ bụla dị na folda a, anyị pịa bọtịnụ ahụ Mgbanwe (Uppercase) nke Windows anyị mgbe anyị na-pịa nri òké bọtịnụ na na dialog window na-egosi na anyị họrọ nhọrọ nke Mepee windo iwu ebe a.
Anyị jikọọ LG na kọmputa nkeonwe ya na eriri USB mbụ ya, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ma soro ntuziaka ndị a:
Ugbu a, anyị ga-abanye iwu na-esote na njedebe ma ọ bụ windo iwu:
Lelee LG gị ebe ọ bụ na ihuenyo ya Window ga-apụta na nke ị ga-akwado njikọ ahụ site na ADB iji kọmputa nkeonwe. Na mgbakwunye na inye ikike na ikwenye njikọ na kọmputa nkeonwe, chetakwa ịlele igbe kwekọrọ na ya ka ọ ghara ịjụ anyị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị ekwe ka njikọ ahụ site na adb.
Ozugbo enyere ikike maka ọnụ, anyị LG ga-amaliteghachi na-akpaghị aka iji gosi anyị ọnọdụ bootloader. Ọ bụrụ na ọ maliteghị na-akpaghị aka, tinyeghachi iwu gara aga otu oge ọzọ wee pịa Tinye.
Ugbu a, anyị ga-abanye iwu na-esonụ:
Ọnụ ma ọ bụ windo iwu ga-akọ akụkọ dịka nke a:
Ugbu a, anyị ga-eme tụọ ma sonye na otu akara na enweghị oghere nọmba niile na mkpụrụedemede pụtara n’okpuru ederede Ngwaọrụ-NJ nke mere na anyị nwere ihe dị ka nke a:
Ozugbo e gosipụtara ọnụ ọgụgụ ahụ, anyị na-apụ na ọnọdụ bootloader na iwu na-esonụ:
Ozugbo LG malitegharia, anyị na-emeghe ekwentị dialer na anyị na-ede na-esonụ koodu: 06 # - kọọrọ anyị nọmba IMEI nke LG anyị, ọnụọgụ ọnụọgụgụ 15 nke anyị ga-ede ma chekwaa.
Ugbu a bụ mgbe site na ihe nchọgharị weebụ nke Windows anyị, ihe ọ bụla ọ bụ, anyị na-aga na peeji nke gọọmentị nke LG na ịpị otu njikọ a, na n’ala ala ihe niile, anyị pịa ebe o kwuru Unkpọghe Bootloader.
Ugbu a, anyị ga-ejupụta ubi ndị kwekọrọ, Ngwaọrụ-NJ, Nọmba IMEI na email ka LG jiri aka ya rụọ ọrụ nwere ike zitere anyị email ọhụrụ nke anyị ga-enweta faịlụ Unlock.bin. Anyị na-ebudata faịlụ Unlock.bin ma tinye ya na nchekwa ADB, na otu folda ahụ anyị gwara gị na mbụ Mepee windo iwu ọhụrụ ebe a. Anyị na-emeghe windo iwu ebe a ma soro ntuziaka ndị a:
Ọnụ ahụ malitegharia ọzọ na ọnọdụ bootloader ebe anyị ga-pịa iwu na-esonụ:
fastboot flash kpoghe unlock.bin
N'ikpeazụ, mgbe usoro ahụ gwụchara, anyị ga-amaliteghachi ọnụ ya na iwu ahụ:
Ugbu a ọnụ ga-amaliteghachi ọzọ, oge a na data gị niile na ngwa gị ehichapụ ọ bụ ezie na ekpochapụrụ bootloader yabụ ị nwere ike ịgbaso nkuzi nkuzi ndị ga - esote ebe anyị ga - akuziri gị otu esi etinye nwelite gbanwetụrụ na LG gị ma gbanye ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Etu ị ga-esi kpọghee bootloader nke LG gị, ọ dị mma maka LG G5, LG G4 na LG V10
Ezigbo Francisco, usoro a ọ kwekọrọ na H815p? ekele maka ịzaghachi
Ndewo Francisco Enwere m LG K430 ka bootloder gbochiri ma eziokwu ụzọ ndị a anaghị arụ ọrụ maka m, m ga-achọ ịma ma ọ bụrụ na otu ụbọchị, m ga-enwe ike ịtụgharị ya ekele maka ịza ajụjụ.
Enwere m lg efu LG H650 nwere ike mmadụ nye m nkuzi gbasara etu esi emeghe bootloader
Modelsdị atọ a akọwapụtara karịa na weebụsaịtị LG. Ihe ha kwesiri ime bu nkuzi maka uzo ndi ozo nke otu onu ogugu, nke ihe omuma ha di obere na ndi nwe ha na-ata ahuhu mgbe ha na-acho imezi ha.
Usoro a dị mma maka k200 maka azịza gị
Enwere m LGKi20AR dị ka nke a ma ọ bụ dị ka nke a LGKl20AR ị ga - enyere m aka
Enyemaka! Bootloader kpọghee maka lg k350ar, daalụ n'ọdịnihu.
Ọ dị mma na m nwere mmasị na onyinye gị
Zaghachi Victor Keysi Cuevas
Etu ibudata egwu sitere na Spotify, Apple Music, Google Play Music na ngwa egwu egwu ndị ọzọ